Ambohibao : jiolahy nanafika tamin’ny basy plastika, voasambotra | NewsMada
Ambohibao : jiolahy nanafika tamin’ny basy plastika, voasambotra
Lehilahy iray no voasambotry ny zandary ambodiomby teo am-pandrahonana ho faty an-telefaonina, teny Ambohibao, ny 5 avrily teo. Mpivady ity nantsoiny ary norahonany ho vonoina raha tsy manome azy vola 10 tapitrisa Ar azy.
Ity jiolahy ity izay voalaza fa mpiambina ny tranon’ireo olona norahonany ihany teo aloha. Roa andro talohan’ny nahasamborana azy, nisy lehilahy iray nisaron-tava tafiditra tao an-tranon’ireo mpivady ireo ka namantana tao an’efitra fandrian’izy ireo. Ramatoa irery no tao fa efa nifoha ilay rangahy ary tany an’efitra hafa. Nambanan’io jiolahy io basy ilay vadiny sady nosavainy ny “armoire” saingy tsy nisy ny zavatra nokarohiny tao. Nikiakiaka ilay renim-pianakaviana ka taitra ilay vadiny sy ny mpanampy tany amin’ny efitra hafa rehetra tany ary namonjy nivoaka ny trano niantso vonjy. Tafatsoaka ilay mpanafika ary tsy nisy zavatra azony.
Niantso ny zandary miasa ao amin’ny Poste avancé Ambohibao izy ireo, ka rehefa nozahana ny tahirin-tsary tao amin’ny “camera de surveillance” hitan’ireo tompon-trano fa mety ho ilay mpiambina azy ireo taloha izay efa nesorina tamin’ny jolay 2016 io hita tao io. Voalaza fa efa 7 taona no niasany tao amin’izy mivady.
Ny harivan’ny andron’ny fanafihana, niantso an-tariby azy mivady ilay lehilahy ary nilaza fa hamono azy ireo raha toa ka tsy manome vola 10 tapitrisa Ar ary aterina eny akaikin’ny A&C Ivato.
Nilaza tamin’ny zandary ireto voarahona ka natao ny vela-pandrika rehetra izay niafara tamin’ny fahatrarana azy io teo am-piantsoana finday ireo mpivady ireo teo amin’ny taxi-phone iray teo Ambohibao, ny 5 avrily maraina.
Natao ny famotorana ka fantatra fa izy no nangalatra ny vola an-tapitrisa izay efa very tao amin’ireto mpampiasa azy ireto fony izy mbola niasa tao. Izy koa ilay niditra vao maraina nisaron-tava roa andro talohan’io, ka basy plastika no nentiny nanafika tao. Natolotra ny fampanoavana ny zoma maraina teo izy, ka naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora.